Disneyland Paris ifuna kumnandi! Lena umhlahlandlela indlela ohlela okungcono Disneyland iholide Paris ngesikhathi ihlobo nobusika, kodwa ngobuqotho emangalisayo kukho konke inkathi. Okusanda, ngenxa yokulungiswa okukhulu ngaphambi komgubho weDisney Paris, esiningi kwepaki ibuyiselwe lisebukhazikhazini balo yasekuqaleni. Lomgubho ngokwayo iphelile, kodwa kukhona namanje izindaba ezinhle. Iningi ukuzijabulisa entsha ukuhlala! Kwakuhle! Izophinda zithasiselwa nge Halloween futhi Christmas ukuzijabulisa ngokusebenzisa kokuphela konyaka.
Uma ecabanga ngokuvakashela ekuqaleni 2019, umcimbi weThe Legends of the Force Star Wars uqala ngoJanuwari 12 uMashi 17, 2019, kanye Pirates & Umkhosi wamakhosazana uzoba ngoJanuwari 19 uMashi 17, 2019. Ngemva kwalokho, Marvel Isizini Super-Heroes zizambalekela Mashi 23 kuya ku-June 16, 2019, futhi iNgonyama King kanti iJungle Festival izoqala ngoJulayi kuya kuSepthemba 2019, kulandele Halloween futhi Christmas zonyaka.
Uma ungumhleli wesikhathi eside futhi ufuna ukulilungela ngokuphelele iholide lakho leDisneyland eParis phakathi nobusika nehlobo, ke lolu lwazi kuzokwenza umamatheke. Disneyland Paris umemezele eside izinhlelo zayo ezihilela Marvel, I-star wars, futhi eqandisiwe njengengxenye $2.5 bhiliyoni nalomsebenzi kuya Walt Disney Studios Park.
Uma ecabanga ngokuvakashela ekuqaleni 2019, umcimbi weThe Legends of the Force Star Wars uqala ngoJanuwari 12 uMashi 17, 2019, kanye Pirates & Umkhosi wamakhosazana uzoba ngoJanuwari 19 uMashi 17, 2019. Ngemva kwalokho, Marvel Isizini Super-Heroes zizambalekela Mashi 23 kuya ku-June 16, 2019, kanye Lion King futhi Jungle Festival izokwenzeka kusuka ngoJulayi kuya kuSepthemba 2019, kulandele Halloween futhi Christmas zonyaka.
Ngokungangabazeki, abaningi ezihlekisayo isikhathi ukuvakashela Disneyland Paris uKhisimusi-eduzane maphakathi no-November uma iqala. ngokuvamile, Disney sika Enchanted Christmas esiqala ekuqaleni kuka November ngokusebenzisa ekuqaleni kuka-January. Yisikhathi esihle kakhulu sokuvakashela iDisneyland Paris ngokuzijabulisa okwengeziwe kwezinkathi ezithile kanye nemihlobiso emihle nxazonke zepaki. plus, awukwazi beat bazizwa we City of Paris phakathi nezinyanga iholide.
Hlela kusengaphambili bese ugcine, nge ukutholakala ohamba phambili ku-Winter 2019/2020 nge Ukufika kusukela 7th Novemba 2019 ukuze 1st April 2020. Hlela iholide lakho lamaphupho ngaphambili!
Nakhu esicabanga ukuthi kufanele ukubeke phambili ngesikhathi sokuvakasha kwakho Disneyland Park. Ezinye zazo ngeke zizwakala zijwayelekile uma usukhishiwe ukuze amapaki American, kodwa kunomehluko ngokuvamile ngokwanele (noma ukungabi nalwazi noma wobuhle) ukwenza izinguqulo Paris bazizwa esiyingqayizivele. Futhi ukuhamba okuhle kakhulu lapha ukukhanga kweqiniso okukodwa okuhlanganisa amaqhinga akudala e-Disney ngendaba entsha ethakathayo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdisneyland-vacation-paris%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)